ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Europe & Asia Commercial Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၈/၂၀၁၆) ‹ အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန
အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Europe & Asia Commercial Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၈/၂၀၁၆)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ်(၂၅၀)ရှိ ဦးစိန်မြင့် ပိုင်ဆိုင်သော Europe & Asia Commercial Co..,Ltdနှင့် အလုပ်သမားဦးအောင်နိုင်ထွေးပါ(၃၄)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အပေါ်ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ အယူခံတက်လာမှု အပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်း အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးထွန်းအေး နှင့် ဦးနေမင်း တို့ ပါဝင်သောခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ခုံအဖွဲ့မှတောင်းဆို သူနှင့်တောင်းဆိုခြင်း ခံရသူတို့၏ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆို ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၄၈/၂၀၁၆)ဖြင့် ၂၅-၇-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။အပြည့်အစုံသိရှိနိုင်ပါရန်....... (285)
EPS စနဈ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျး(ကိုရီးယား)
နိုငျငံခွားသား အိမျမှုကိစ်စ လုပျကိုငျသူမြားအတှကျ လမျးညှနျစာအုပျ
ပွညျနယျ/တိုငျးဒသေကွီးမြားရှိ အလုပျအကိုငျနှငျ့ အလုပျသမားရှာဖှရေေးရုံးမြား
အလုပျခနျ့ထားမှုဆိုငျရာသဘောတူစာခြုပျ ရေးဆှဲခြုပျဆိုကွရနျ အသိပေးကွငွောခွငျး
ဌာနမြားအလိုကျ Update သတငျးမြား စုစညျးဖျောပွမှု
လအလိုကျ သတငျးမြား Select Month July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012
လူမှုဖူလုံရေးအဖှဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောကျပံ့ကူညီမှု အကြိုးခံစားခှငျ့ ၄၀% စိစဈခှငျ့ပွုရေးဘုတျအဖှဲ့ အစညျးအဝေးအမှတျစဉျ (၄၂/၂၀၂၀) မှ စိစဈခှငျ့ပွုမညျ့ စကျရုံ/အလုပျရုံ/အလုပျဌာနမြား
လူမှုဖူလုံရေးအဖှဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောကျပံ့ကူညီမှု အကြိုးခံစားခှငျ့ ၄၀% စိစဈခှငျ့ပွုရေးဘုတျအဖှဲ့ အစညျးအဝေးအမှတျစဉျ (၄၁/၂၀၂၀) မှ စိစဈခှငျ့ပွုမညျ့ စကျရုံ/အလုပျရုံ/အလုပျဌာနမြား
လူမှုဖူလုံရေးအဖှဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောကျပံ့ကူညီမှု အကြိုးခံစားခှငျ့ ၄၀% စိစဈခှငျ့ပွုရေးဘုတျအဖှဲ့ အစညျးအဝေးအမှတျစဉျ (၄၀/၂၀၂၀) မှ စိစဈခှငျ့ပွုမညျ့ စကျရုံ/အလုပျရုံ/အလုပျဌာနမြား
လူမှုဖူလုံရေးအဖှဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောကျပံ့ကူညီမှု အကြိုးခံစားခှငျ့ ၄၀% စိစဈခှငျ့ပွုရေးဘုတျအဖှဲ့ အစညျးအဝေးအမှတျစဉျ (၃၉/၂၀၂၀) မှ စိစဈခှငျ့ပွုမညျ့ စကျရုံ/အလုပျရုံ/အလုပျဌာနမြား
လူမှုဖူလုံရေးအဖှဲ့ လူမှုဖူလုံရေးထောကျပံ့ကူညီမှု အကြိုးခံစားခှငျ့ ၄၀% စိစဈခှငျ့ပွုရေးဘုတျအဖှဲ့ အစညျးအဝေးအမှတျစဉျ (၃၈/၂၀၂၀) မှ စိစဈခှငျ့ပွုမညျ့ စကျရုံ/အလုပျရုံ/အလုပျဌာနမြား
Myanmar Solamoda Garment(2)(အထညျခြုပျစကျရုံ) ပိုငျရှငျ Mrs. Jing Aimei(ကိုယျစား) ဒျေါအေးအေးအောငျ(HR Manager) (အလုပျရှငျ၏ အထူးကိုယျစားလှယျ လှဲအပျခွငျးခံ ရသူ) ၊ နှငျ့ ဒျေါနှငျးကွညျ(အလုပျသမား)တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
Zulfiqur Motors Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါဌေးဌေးလှငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျ၏CNICO ကုမ်ပဏီ နှငျ့ မခငျနှငျးလှိုငျ ပါ အလုပျသမား (၆) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျ၏Myanmar Handsome Garment Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါအေးကွှယျ ပါ(၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၁/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျ၏UMG Education Co.,Ltd နှငျ့ ဦးအေးဇျောဇျော တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၄/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျ၏နပွေညျတျောအဆငျ့မွငျ့ရုပျရှငျရုံ နှငျ့ ဒျေါငွိမျးငွိမျးမွတျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၆/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျ၏ပုလဲအထညျခြုပျစကျရုံနှငျ့ ဒျေါဝါဝါခိုငျ ပါ (၅၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၂/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Strong Source Holding Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါဝငျ့ငွိမျးခိုငျတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၃/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ AAA ဘိလပျမွစေကျရုံ၊ ကြောကျဆညျမွို့ နှငျ့ ဦးကြျောသကျဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၆၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Able Better Garment Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါစနျးစနျးလှငျတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Asdet (Myanmar) Garment Co., Ltd နှငျ့ ဒျေါကသေီမိုး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၂/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ BAOMA Knitting သိုးမှေးထိုးစကျရုံ နှငျ့ အလုပျသမား ဒျေါခငျလှဝငျး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ BC Finance Co.,Ltd နှငျ့ ဦးစိုးပိုငျပါ(၂)ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Charis Co.,Ltd နှငျ့ ဦးဝငျးမိုးထကျပါ အလုပျသမား(၂၂၈)ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Chung Hing Myanmar Limited (သိုးမှေးထိုးအထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးမြိုးထှနျးဇျော တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ CMF Myanmar-2 Co.,Ltd (အိတျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါမြိုးမြိုးလှငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd နှငျ့ ဦးဖွိုးဝအေောငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Denko Trading Co., Ltd (စကျသုံးဆီအရောငျးဆိုငျ) နှငျ့ ဒျေါခိုငျနှငျးဝေ (အလုပျသမား) တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၁/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Denko Trading Co.,Ltd နှငျ့ ဦးနိုငျဌေးမငျး ပါ (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Denko Trading Co.,Ltd နှငျ့ ဦးရဲကြျောမိုး ပါ (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Denko Trading Co.,Ltd နှငျ့ ဦးဝငျးစိုး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၅/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Dong Yu Garment Co.,Ltd အထညျခြုပျစကျရုံ နှငျ့ ဒျေါမိုးမိုးအောငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Dream Vision Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါအိနန်ဒာမောငျ (ခ) ဒျေါက်ကန်ဒွာကြျော တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ DS ကွှပွေားစကျရုံ နှငျ့ ဦးလှမိုးလှငျ ပါ အလုပျသမား (၃) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၁/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Eslite Garments Co.,Ltd နှငျ့ ဦးသနျ့ဇငျဝငျးပါ (၂)ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Exploration Logistics Private Limited Company နှငျ့ ဦးအောငျသူတငျဝငျး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Fang Yuan Myanmar Co., Ltd (ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးသုံးပစ်စညျးစကျရုံ) နှငျ့ ဦးမောငျမောငျထှေး ပါ အလုပျသမား (၃၆) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၀/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ First Star Co.,Ltd နှငျ့ ဦးကြျောဌေး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ FTE Corporation (Myanmar) Co.,Ltd နှငျ့ ဦးသကျဦး ပါ (၄) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Full Way Myanmar Clothing Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါအေးသင်ျကွနျမပေါ အလုပျသမား ၃ ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Futeli Garment (Myanmar) Co., Ltd နှငျ့ ဒျေါညိုညိုအေး ပါ အလုပျသမား (၃) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၃/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ GETC & Nurture Pre School နှငျ့ ဦးနိုငျမြိုးသူ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Gold Delta Co., Ltd (ဆနျနှငျ့ ဆနျထှကျပစ်စညျးလုပျငနျး) နှငျ့ ဒျေါခိုငျမာလာသငျး (အလုပျသမား) တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၀/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Gold Empire (Myanmar) Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါခငျလေးငယျ ပါ အလုပျသမား (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Golden Forest Co., Ltd (ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျး) နှငျ့ ဦးအောငျကြျောမငျး(အလုပျသမား) တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၈/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Golden Myan-Tai Co.,Ltd (ဥက်ကံသကွားစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါဝငျးနန်ဒာလှိုငျ ပါ (၂၂၆) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Green Alliance Energy Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါနဇောလှငျစိုးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၀/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Green Nature manufacturing Co.,Ltd အထညျခြုပျစကျရုံ နှငျ့ ဦးရှိုငျးထကျလငျး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Gust Myanmar Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါအေးသူဇာပါ အလုပျသမား (၉၆)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၉/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Hand Steel Power Co.,Ltd (သံရညျကြိုနှငျ့သံနနျးဆှဲစကျရုံ) နှငျ့ ဦးသကျနောငျပါ(၆)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Hunter Myanmar Apparel Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါမသေန်တာပါ အလုပျသမား ၃၁ ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Hunter Myanmar Apparel Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါသန်တာဝငျးပါ (၁၁)ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ J-Land Myanmar Co.,Ltd(အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါသိမျ့သိမျ့စမျး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Jia Mei Carton Products Co.,Ltd နှငျ့ ဦးခငျမောငျဝငျး(လစားယာဉျမောငျး)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၆/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Jia Mei Carton Products Co.,Ltd နှငျ့ ဦးစောလားစရူး(နစေ့ားယာဉျမောငျး)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၅/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ JIA MEI Garment Co., Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ အလုပျသမား ဒျေါထကျထကျပါ (၁၁) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၉/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Jiangsu Zhenjiang Installing Engineering Co.,Ltd နှငျ့ ဦးစိုးနိုငျထှနျးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၆/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Joint-Profit (Myanmar) Garment Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးသီဟကြျော တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Kamcaine Manufacturing(Myanmar) Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးဇငျကိုလတျပါ အလုပျသမား (၄၇)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Korea Link Industrial Co.,Ltd နှငျ့ အလုပျသမား ဒျေါနီနီဝငျး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Korea Link Industrial Co., Ltd နှငျ့ ဒျေါနှငျးရှစေငျ ပါ အလုပျသမား (၄) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Krislite Lighting Specialist Co.,Ltd နှငျ့ ဦးမြိုးမငျးဝငျးတို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၄/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Lat War-2 Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးနိုငျလငျးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ LIA International Co.,Ltd (ခွအေိတျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါနှယျနှယျ ပါ (၂၅) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ LIA International Co.,Ltd (ခွအေိတျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးဇငျဘို ပါ (၄၈) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ LIA International Co.,Ltd. (ခွအေိတျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါတငျတငျပို တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ LIA International Co.,Ltd. (ခွအေိတျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါအိအိကြျော တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Lian Cheng Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါမိစံမိုးပါ အလုပျသမား(၃)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Lian Cheng Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးသောငျးလှိုငျ(စကျပွငျ/အလုပျသမား)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Lian Cheng Myanmar Co.,Ltd နှငျ့ ဦးနိုငျထကျလငျးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Lic Jin Industry Co.,Ltd (ဖိနပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးအောငျကိုကိုဇျောပါ အလုပျသမား(၄)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Mac Do ဆံပငျတုစကျရုံ နှငျ့ ဒျေါစိုးနှယျဦး (ပါ) အလုပျသမား (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Ming Da Polyester Wadding (Myanmar) Co.,Ltd (ဂှမျးခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးကြျောသူ ပါ (၇) ဦးတို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၅/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Mintex (Myanmar) Industrial Co., ltd (ဇာပနျးထိုးစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါလဲ့လဲ့အေး ပါ (၇) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၅/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Miracle Bag Co.,Ltd(အိတျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါယုယုသငျး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ MLA International School (ပုဂ်ဂကစာသငျကြောငျး) နှငျ့ ဒျေါမိမိကွိုငျ(မွနျမာစာပွဆရာမ)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ MLA International School (ပုဂ်ဂလိကစာသငျကြောငျး) နှငျ့ ဒျေါမိမိကွိုငျ (မွနျမာစာပွဆရာမ)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ MLA International School Co.,Ltd (ပုဂ်ဂလိကစာသငျကြောငျး) နှငျ့ ဒျေါမိမိကွိုငျ (မွနျမာစာပွဆရာမ)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Mountain Top Global Ltd (ဖိနပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးအောငျမြိုးဇျောပါ အလုပျသမားမြားအကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ MST Underwear Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါအေးသီတာစိုး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ MST Underwear Co.,Ltd နှငျ့ ဦးသိနျးသနျးထှဋျ တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၆/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Brewery Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါနှငျးထကျထကျအောငျတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Fuwah Sportsware Co.,Ltd (အားကစားအိတျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးငွိမျးခမျြးမောငျပါ အလုပျသမားတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Giant Co., Ltd နှငျ့ ဦးခဈြကိုလတျ ပါ အလုပျသမား (၃)ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၈/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Li Bao Handbag Co.,Ltd နှငျ့ ဦးထကျအာကာထှေးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၄/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar LNY Caps Co.,Ltd (ဦးထုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါထကျထကျဝငျး (စကျခြုပျ)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Lucky Phoenix International Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါဟမောနျအောငျ (အလုပျသမား)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Peltier Bois Co.,Ltd (အထပျသားစကျရုံ) နှငျ့ ဦးကြျောမြိုး ပါ (၁၄) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Pou Chen Co.,Ltd နှငျ့ ဦးခနျ့စညျသူပါ အလုပျသမား ၅ ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Recycles Plastic စကျရုံ နှငျ့ အလုပျသမား ဦးစိုးမငျး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၇/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Ruby Phoenix Shopping Co., Ltd နှငျ့ ဒျေါယဉျယဉျအေး ပါ အလုပျသမား (၈) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၇/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Sumec Win Win Co., Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ အလုပျသမား ဒျေါမဉ်စူသငျး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Sumec Win Win Garment Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါမွတျမွတျမိုးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၂/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Synergy Garment Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါဝါဝါခိုငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Tah Hsin Industrial Co.,Ltd နှငျ့ ဦးဖွိုးဇာနညျစိုး ပါ (၁၂၃) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Yin Jin Steel Structure Co., Ltd နှငျ့ ဦးကြျောသူ ပါ အလုပျသမား (၂) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၂/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar York Co., Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါသီတာဝငျး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၀/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmar Yun Cheng Plate Making Co., Ltd နှငျ့ ဦးဇျောဝငျးရှေ တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၄/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Myanmode Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးသှငျးအောငျပါ အလုပျသမားမြားအကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Nakagawa Chemical Equipment Myanmar Co.,Ltd နှငျ့ ဦးငွိမျးခမျြးဇျော တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ National Energy Puma Aviation Service Co.,Ltd နှငျ့ ဦးဝငျးကွိုငျတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ National Energy Puma Aviation Service Co.,Ltd နှငျ့ ဦးအောငျကိုဦးပါ (၅)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ National Energy Puma Aviation Services Co.,Ltd နှငျ့ ဦးစောရှဘေပါ အလုပျသမား (၂၀)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Nature Timber Trading Co., Ltd (JLPC သဈပါးလှာစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါသန်တာထှေး ပါ အလုပျသမား (၁၃) ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၆/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ New Comfort Industry Co.,Ltd နှငျ့ ဦးဇျောမငျးထှေး ပါ (၂၅) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ New Way Shoe Co.,Ltd (ဖိနပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးဝငျးခိုငျဦးပါ (၁၂၃)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Oil Tex Myanmar Limited (အိတျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါသန်တာအေး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ OK ကွာဇံစကျရုံ နှငျ့ ဦးလှမြိုးထှနျး ပါ အလုပျသမား (၁၉) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၉/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Omni Focus Co.,Ltd (YBS 20) နှငျ့ ဦးအောငျကိုဝငျး(အလုပျသမား) တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၉/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Oway Travel & Tour Co.,Ltd နှငျ့ ဦးထှနျးလှငျဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Popular Garment (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါသီတာ (ပါ) အလုပျသမား (၈၇)ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Quality Apparel Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါအေးအေးမူ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ REVA Co., Ltd (ဖိနပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါခိုငျမာအေး ပါ အလုပျသမား (၅) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၇/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Roo Hsing Garment Manufacturing Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါဝငျးရီ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Roo Hsing Garment Manufacturing Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါဇငျမာလှိုငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Roo Hsing Garment Manufacturing နှငျ့ ဒျေါစနျးသျောတာ တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၃/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Royal Club Beverage Co., Ltd နှငျ့ ဦးဝလေငျးဦး(အလုပျသမား) တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၁/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Ruifa Enterprise Co.,Ltd (အိတျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးထကျအောငျဖွိုးပါ အလုပျသမား(၄)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd အထညျခြုပျစကျရုံ နှငျ့ ဒျေါခငျပပခိုငျ ပါ (၂၈၁) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Seduno(Myanmar) Fashion Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးဇျောဇျောထှေး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Seven Aluminium Co.,Ltdနှငျ့ ဦးအောငျအောငျပါ(၂)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၇/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Shuang Jhuo Yue Co.,Ltd (ဖိနပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါဌေးဌေးဝငျး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၆၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ SHYANG JHUO YUE Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါတငျစုခိုငျ ပါ အလုပျသမား (၆၀) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Si Yuan (Myanmar) Co.,Ltd (သတိုးသမီးဂါဝနျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါမာမာဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Special Manufacturing Co.,Ltd နှငျ့ ဦးခငျမောငျစိုး ပါ (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Star World Plastic Manufacturing နှငျ့ ဦးကိုကိုဆငျ့ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Success Time International Co.,Ltd ဖိနပျစကျရုံ နှငျ့ ဒျေါအေးအေးနှယျ(​ဒျေါခငျအေးနှယျ) ပါ (၄၈) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Sunforce International Co.,Ltd (သဈအခြောထညျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးဌေးသူအောငျပါအလုပျသမား (၆၅)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၇/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Sunshine Concrete Co.,Ltd နှငျ့ ဦးမောငျဌေး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Sunshine Milestone Construction Service Co., Ltd နှငျ့ အလုပျသမား ဦးထိနျလငျးထှနျး ပါ (၂) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၆/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Suzhou Silk Fashion (Myanmar) Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါခိုငျခိုငျထှနျး ပါ (၄) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၆၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ THIT & MYO BROTHERS Co.,Ltd နှငျ့ ဦးသီဟအောငျပါ အလုပျသမား (၄)ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Thong Thai Texitle Myanmar Co.,Ltd အထညျခြုပျစကျရုံ နှငျ့ ဦးကြျောလှငျဦး ပါ အလုပျသမား (၂၆၀) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၄/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Tian Jin-1 Fashion Origin Co., Ltd နှငျ့ ဦးသနျးတိုးအောငျ ပါ အလုပျသမား (၉) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၂/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Tian Jin-1 Fashion Origin Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးသနျးတိုးအောငျပါ အလုပျသမား(၅)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Trends Design Furnishing Co.,Ltd နှငျ့ ဦးအောငျစိုး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Trinity Apparels Limited (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါသကျသကျမာပါ အလုပျသမား (၂)ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Win & Win Co.,Ltd နှငျ့ ဦးသိနျးထှေး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Xian Yi (အိတျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးကိုကိုလငျးပါ အလုပျသမား ၁၃ ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Xiang Yi Co.,Ltd (အိတျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါထှေးရီပါ အလုပျသမား(၈၆)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Yangon Bus Public Co., ltd (ရနျကုနျဘတျဈကား အမြားနှငျ့သကျဆိုငျသော ကုမ်ပဏီ) နှငျ့ ဦးနိုငျစိုးဝငျး ပါ ယာဉျမောငျးအလုပျသမား (၄) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၄/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Yangon Bus Public Co.,Ltd (YBPC) နှငျ့ ဦးမွငျ့သိနျး (ဂိတျမှူး) တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Yangon Bus Public Co.,Ltd နှငျ့ ဦးတငျဦး (ပါ) အလုပျသမား (၈)ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Yangon Bus Public Co.,Ltd နှငျ့ ဦးမြိုးမွငျ့တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Yangon Bus Public Co.,Ltdနှငျ့ ဦးကိုကိုအောငျ(ယာဉျမောငျး)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Yangon International Hotel နှငျ့ ဦးအောငျနိုငျထှနျး(Senior Engineer)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၀/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Yangon Panatex Apparel Co., Ltd နှငျ့ ဒျေါအေးမွငျ့အောငျ ပါ (၂) ဦး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၅/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Young Clothing Co., Ltd နှငျ့ ဒျေါအိမှနျကြျော ပါ အလုပျသမားမြား အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၆/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ Young Insurance Holding Co.,Ltd နှငျ့ ဦးလငျးထကျဟိနျး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ ခိုငျမွဲခိုငျကုမ်ပဏီ (City Bus Service Center) နှငျ့ ဦးကြျောဖွိုးဝေ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ စံကောငျးပီနံအိတျစကျရုံ နှငျ့ အလုပျသမား ဒျေါဝါဝါမိုး တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ(၅/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ စှမျးထကျတိုငျးရငျးဆေးဝါးထုတျလုပျရေးလုပျငနျး နှငျ့ ဒျေါမွမွမြိုး ပါ (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ တကျလှိုငျးကုမ်ပဏီလီမိတကျ နှငျ့ ဦးဇငျကိုထကျ ပါ (၃) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ မွနျမာနိုငျငံသားမြားဘဏျ (MCB) နှငျ့ ဒျေါစုဝငျးမွတျ (Senior Vice President/အထှထှေမေနျနဂြော)တို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ ရတနာ့မတ်ေတာအဖှဲ့၊ Pact MARC Project နှငျ့ ဒျေါဆှဆှေအေောငျ (Cashier) တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ ရှဇေငျအေး အထညျခြုပျစကျရုံ နှငျ့ ဦးဇာနညျ ပါ (၇) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ ရှငျးယနျအိတျခြုပျစကျရုံ နှငျ့ ဦးစိုးအောငျပါ (၂၀)ဦးတို့အကွားဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၁/၂၀၂၀)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ အငျပါယာစက်ကူစကျရုံ နှငျ့ ဦးဇငျနိုငျဝငျး ပါ (၁၇) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၆၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ ဦးထှနျးတောကျဝငျး OMNIFOCUS GENERAL SERVICES PUBLIC Co.,Ltd နှငျ့ ဦးကွှယျဝငျးအောငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၄/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Air Mandalay Ltd နှငျ့ ဦးမွငျ့ရှေ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၅/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd (အခြိုရညျစကျရုံ) နှငျ့ ဦ:သနျ့ဇျောအောငျ ပါ (၁၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Diamond Mercury Wood Products Ltd (သဈအခြောထညျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးအောငျသှငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၈/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏GFX International Consultancy Co.,Ltd နှငျ့ ဦးဂြျောနီ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၇၈/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏L & M Mayson Co.,Ltd (မုနျ့ဖုတျလုပျငနျး) နှငျ့ ဦးအောငျအောငျ ပါ ယဉျမောငျး (၆) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၂/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏MacDo Co.,Ltd (ဆံပငျတုစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါစနျးစနျးမွငျ့ ပါ (၂၉) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏MacDo Co.,Ltd (ဆံပငျတုစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါသဲစုမှနျ ပါ (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၅၉/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏MacDo Co.,Ltd (ဆံပငျတုစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါဥမ်မာဖွူ ပါ (၂၈) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၆၀/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Myanmar Consolidated Media Co.,Ltd နှငျ့ ဒျေါမို့မို့သျော၊ ဦးသကျလှိုငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၄၁/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Myanmar Red Dot Net Work Ltd နှငျ့ ဦးစညျသူ၊ ဒျေါသဉ်စာအေးကွိုငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၇၉/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Myanmar Skyrun International Co.,Ltd အထညျခြုပျစကျရုံ နှငျ့ ဦးလှဝငျး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၇/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Popular Plastic Group နှငျ့ ဦးစိုးမွငျ့ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Power Fashion(2) အထညျခြုပျစကျရုံ နှငျ့ ဦးရဲတိုးအောငျ ပါ (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဒျေါကွူကွူခိုငျ ပါ (၁၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Seduno (Myanmar) Fashion Co.,Ltd (အထညျခြုပျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးနိုငျလငျးဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၉/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏Silver Lion Industrial Co.,Ltd နှငျ့ ဦးခငျစိုး ပါ အလုပျသမား (၅) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၈၀/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ကြျောထကျကြျောကုမ်ပဏီလီမိတကျ(အုတျကငျြးဂုနျနီအိတျနှငျ့ လြှျောရှေးလြှျောထုတျစကျရုံ) နှငျ့ ဦးလှဌေးအောငျ ပါ (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၆/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ထှနျးသဈစကြားဖွူအထညျခြုပျစကျရုံ နှငျ့ ဦးမြိုးမငျးလှိုငျ တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏အောငျနိုငျသူပလပျစတဈထုတျလုပျမှုကုမ်ပဏီလီမိတကျ နှငျ့ ဦးနမြေိုးလငျး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၁၈/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိအဖှဲ့၏ National Energy Puma Aviation Service Co.,Ltd နှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၆၈/၂၀၁၉)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ၉၉၉ စက်ရုံ(ဧရာသံရည်ကျိုစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်နိုင်နိုင်မော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၁/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ASAHI FAN GARMENT (MYANMAR) Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်မြတ်ကေသွယ် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၄/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Asia Optical မှန်ဘီလူးစက်ရုံ နှင့် ဦးရန်နောင်စိုး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၈/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Aung Kenbo Telecommunication Co.,Ltd (Kenbo Smart Phone Heldan Showroom) နှင့် ဒေါ်သက်ဖူးဇင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၈/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Bangkok Women’s Health Centre နှင့် ဒေါ်သိမ့်ဟယ်နီထွန်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၉/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Can Full Industries Co.,Ltd (သွပ်ပြားစက်ရုံ) နှင့် ဦးကျော်စိုး (ပါ) ၅ ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၄/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ CMHL Distribution Center(Seasons Bakery) နှင့် ဦးဘုန်းသက်အောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၆/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Dishang Kenny Myanmar Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ကောင်းမြတ်ခင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၀/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ DJY Knitting (Myanmar) Co.,Ltd နှင့် ဦးစိုးသူရကို တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၂/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ DJY Knitting(Myanmar) Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်စောပြည့်သန္တာအောင် (ပါ) ၂၂၈ ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၁/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ DVB Multimedia Group Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ဝင်းပပ(ခ)ဒေါ်ညိုမာသက် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၆/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ East Growth အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်နိုင်နိုင်လွင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၉/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Great Apex International Co.,Ltd (သစ်ခွဲစက်ရုံ) နှင့် ဦးအောင်မျိုးဇော် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၁/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Hallmark Manufacturing Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးထွန်းထွန်းဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၂/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Honeys Garment Industry Limited (1) နှင့် ဦးစိုးဝင်းအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ HONEYS GARMENT INDUSTRY LIMITED (1) နှင့် ဦးဆန်းဝင်းလှိုင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၅/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Honeys Garment Industry Limited (1) နှင့် ဒေါ်ယဉ်မျိုးသူ (ပါ) အလုပ်သမား (၃၆၆) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Honeys Garment Industry Limited (1) နှင့် ဒေါ်ကေဇင်ချစ် (ပါ) ၅၄ ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၂/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Honeys Garment Industry Limited (2) နှင့် ဦးဝင်းနိုင် (ပါ) ၁၇ ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ JJAMET (ကြွေပြားဂိုဒေါင်) နှင့် ဒေါ်သိမ့်သိမ့် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၅/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Kamcaine Manufacturing (Myanmar) Co.,Ltd (ကျင်ကျန်အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်မိုးမိုးစန်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၄/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mandalay Bay Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်စောသန္တာနွယ် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၅/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mega Marine Frozen Seafood Co.,Ltd (အအေးခန်းစက်ရုံ) နှင့် ဒေါ်စန္ဒာ (ပါ) ၅ ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၀/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myan Mode Co.,Ltd(အထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးညီညီထွေး (ပါ) ၅ ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၂/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Fiber Optic Communication Net Work Co.,Ltd နှင့် ဦးကျော်ဇေယျာ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၀/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Jiale Fashion Co.,Ltd (2) အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်သဉ္ဇာနိုင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Sutech Co.,Ltd၊ အမှတ် (၁၂) နဝဒေးသကြားစက် နှင့် ဦးအောင်ကိုမင်း၊ ဦးဆန်းဝင်းကို (ပါ) အလုပ်သမား (၃၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၅/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Yes Co.,Ltd နှင့် ဦးကောင်းမြတ်မိုး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၇/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ဥမ္မာထွန်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၆/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar York Fashion Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်နှင်းပပလှိုင် (ပါ) ၃ ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၅/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar York အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အလုပ်သမား) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၀/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Naing Group Construction Co.,Ltd နှင့် ဦးအောင်ကိုကို တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Oli Tex Myanmar Co.,Ltd နှင့် ဦးခင်ဝင်း (လုံခြုံရေးအလုပ်သမား) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၉/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Pan Yoma Co.,Ltd နိုင်လွန်ကြိုးစက်ရုံ နှင့် ဦးထိုက်မောင်မောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၇/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Power Fashion (2) အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးဟိန်းမင်းလတ် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၇/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Style Fashion Accessories (Myanmar) Co.,Ltd (ဦးထုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးဇော်မင်းအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Supreme Water Doctor Co.,Ltd နှင့် ဦးထွန်းချစ် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၇/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Ta Han Food Industrial Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ဇာလီနိုင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၁/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Trends Design Furnishing Co.,Ltd နှင့် ဦးမြင့်သူ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၆/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ UNITED COOL GROUP CO.,LTD (COOL LUE ရေသန့်စက်ရုံ) နှင့် ဦးကံဇော်လင်း ပါ (၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၆/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ တကောင်းတောင် နီကယ်စက်ရုံ နှင့် ဦးတင်မျိုးထွန်း ပါ အလုပ်သမား (၁၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၇/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဖူရှင်းဘရားသားကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးနေလင်းအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၇/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မန်းမြို့တော်ပေါက်စီဆိုင် နှင့် ဒေါ်ကေသီဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၀/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဝင်းသိင်္ဂီကုမ္ပဏီ နှင့် ဦးအောင်မြင့်သိန်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၉/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဦးလှမြင့်အထည်ချုပ် (II)(Indego) စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်နန့်စန်းသီတာ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၁/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှေဇင်အေးအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်ဇင်မာထွန်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၈/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှေပလ္လင် Tea ဆိုင် နှင့် ဦးခန့်နိုင်ဖုန်း (ပါ) (၅) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၂/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြတ်မိဘကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးမြင့်ဆွေ (ပါ) (၃)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၉/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြထိုက်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၈/၂၀၁၇)
ဦးကငျြဦး SOGO (Electrical Industry) နှငျ့ ဒျေါနှယျစိုးပါ (၂၆)ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၅/၂၀၁၈)
ဦးကြျောမငျး Po-Seng PVC Pipe Factory နှငျ့ ဦးမငျးမငျး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၆/၂၀၁၈)
ဦးကြျောဝငျး ရှသေံလှငျဟိုငျဝေးကုမ်ပဏီလီမိတကျ နှငျ့ ဦးဇျောဝငျးပါ (၂၉၉)ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၃၇/၂၀၁၈)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ကမ္ဘာအထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးရဲမြင့် ပါ ယာဉ်မောင်းအလုပ်သမား (၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၄/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ City Global Mark Service Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းလွင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Gallant Ocean အအေးခန်းစက်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ဇာနည်ဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၂/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောငျစီ၏ ဧရာမသံရညျကြိုစကျရုံ နှငျ့ ဒျေါနှဲ့ရီ ပါ အလုပျသမား (၂) ဦး တို့အကွား ဖွဈပှားသော အငွငျးပှားမှုနှငျ့ပတျသကျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ (၇၇/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Beans & Timber Trading Co., Ltd နှင့် ဒေါ်သန္တာမိုးမြင့် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၁/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Comin Asia Co.,Ltd နှင့် အလုပ်သမား ဦးနိုင်ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Prime Pacific Co.,Ltd, အမှတ် (၁) သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ နှင့် ဦးဝေဇော်ထွန်း (ပါ) (၂၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၉/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Sogo Pipe Fitting စက်ရုံ (Popular Plastic Group) နှင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော် (ပါ) အလုပ်သမား (၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ HANGZHOU HUNDRED-TEX GARMENT(MYANMAR) CO., LTD (ဟန်ကျိုးပိုင်ရီအထည်ချုပ်စက်ရုံ) နှင့် ဦးသက်ပိုင်ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၆/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဖူးရှင်းဘရားသားကုမ္ပဏီ နှင့် ဦးအောင်မျိုးမင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၅/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Global Apparel Textile(Myanmar)Manufacturing Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Eva Company Limited နှင့် ဦးသီဟစိုး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၂/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Sogo Pipe Fitting စက်ရုံ (Popular Plastic Group) နှင့် ဒေါ်သင်းယုမော် ပါ (၁၁) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Saiform International Garment Co.,Ltd နှင့် မခင်နှင်းဝေ ပါ အလုပ်သမား (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၀/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Lead Fashion အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဦးအောင်ရဲကျော် ပါ (၂) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mingtex (Myanmar) (2) Industrial Company Ltd နှင့် ဒေါ်ဖြူသက်ပိုင် (ခ) မသီတာ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Trend Design Furnishing Co., Ltd နှင့် ဦးဇင်မျိုးအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ကိုးခရိုင်သားကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးသန်းငွေ ပါ အလုပ်သမား (၃၀) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MacDo Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်အေးမို့မို့ ပါ အလုပ်သမား (၁၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ထင်ဟော်အင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဒေါ်စမ်းအိကျော် ပါ အလုပ်သမား (၇) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ တကောင်းတောင်နီကယ်စီမံကိန်း 15 MCC ကုမ္ပဏီ နှင့် အလုပ်သမားဦးထွန်းထွန်းဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Charming Garments MFG Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်သီတာလှိုင် ပါ အလုပ်သမား ၂၈ ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၇)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Khaing Khaing Sang Da Group Limited (Khaing Khaing Sang Da Motrocar Factory) နှင့် ဒေါ်မြအေး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၇)
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တရားမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုအမှတ် (၃၀/၂၀၁၅) စီရင်ချက်နှင့် ထုံးပုံကျအမိန့်ပေးပို့ခြင်း
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Polar North Garment Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ယမင်းသူဇာ (ပါ) အလုပ်သမား (၃၈) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၈/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Cho Cho Phyu Industrial & Manufacturing Co., Ltd နှင့် ဒေါ်ဇူလိုင်နှင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၇/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ South Bay အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်ခင်မာဝင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၆/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Silver Lion Fiber Glass Co., Ltd နှင့် ဦးအောင်မျိုးမင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၅/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Hope One Co., Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ နှင့် ဒေါ်ခင်သူအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၄/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ The Hotel Umbra Bagan နှင့် ဒေါ်စိုးစိုးလှိုင် (အလုပ်သမား) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြပန်ဝါ ကုမ္ပဏီ နှင့် ဦးသန်းတိုးအောင် (အလုပ်သမား) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၂/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Lincoln Legal Services (Myanmar) Limited နှင့် ဦးတင်မြင့် (ဥပဒေအကြံပေး) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Great Forever Garment Co., Ltd နှင့် အလုပ်သမားဒေါ်မာမာလွင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၉၀/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှေမန်းတောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးကျော်နန်းဦးပါ (၆၉) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၉/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Capital Development Limited နှင့် ဒေါ်အေးအေးအောင် (ပါ) အလုပ်သမား (၁၃၄) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၈/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြတ်မိဘကုမ္ပဏီ၊ ဆပ်ပြာစက်ရုံ နှင့် ဦးအောင်မြင့် (ပါ) အလုပ်သမား (၁၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၇/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ PTTEP International Co., Ltd နှင့် ဦးကိုင်ခိုလတ် (ပါ) အလုပ်သမား (၁၈) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၆/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ချမ်းဟိန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးထွန်းခင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၅/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mann Yadanarpon Airlines Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ကူးကူးကြွယ် (လေယာဉ်မယ်) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၄/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ကိုးခရိုင်သားကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးမျိုးထွန်း ပါ (၃၀) ဦးအကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ စိန်ကမ္ဘာချည်မျှင်စက်ရုံနှင့် ဦးအောင်မိုးမင်းပါ အလုပ်သမား (၄) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၂/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mini Yangon Limited နှင့် ဦးမြင့်စိုးပါ အလုပ်သမား(၁၃)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Young Investment Group Industry Co.,Ltd ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ နှင့် ဦးမြင့်လွင်ဦးပါ (၁၇)ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၀/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ LOTTE MGS Beverage (Myanmar) Co., Ltd နှင့် ဦးတင့်လွင် ပါ (၃) ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၉/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဖူးရှင်းဘရားသားကုမ္ပဏီ နှင့် ဦးမင်းမင်း(၂)၊ ဦးအောင်ပြည့်မောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွား သော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၈/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar May Son Industries Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်သီတာအေး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၇/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Good Morning Enterprise Co., Ltd နှင့် ယာဉ်မောင်း ဦးတင်ကိုကို တို့အကြား
ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၆/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Able Glad Myanmar Co., Ltd နှင့် ဒေါ်မိုးမိုးအောင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၅/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Ideal Busniess Success Co.,Ltd , Sunshine Milestone Construction, Service Co.,Ltd နှင့် ယာဉ်မောင်း ဦးကျော်သီဟ ပါ (၃) ဦး တို့ အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၄/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အာရှနှင်းဆီအထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar May Son Industries Co., Ltd နှင့် အလုပ်သမား ဦးချစ်ကိုကို တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဇေယျကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း နှင့် အလုပ်သမား ဦးငွေလင်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၂/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အုတ်ကျင်းဂုန်နီစက်ရုံ နှင့် အလုပ်သမား ဦးကျော်သန်း တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MacDo Co.,Ltd (ဆံပင်တု စက်ရုံ) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်အိအိခိုင် တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၀/ ၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်နှင်းလဲ့သူ တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက် သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၉/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြန်မာယန်စီကော့ပါးလီမိတက်၊ ကြေးနီသတ္တုတူးဖော်ရေးစီမံကိန်းနှင့် ဦးထွန်းဝေပါ အလုပ်သမား (၃) တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၈/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ လန်းပြီပင်လယ်ရေကြောင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် နှင့် ဦးဝင်းမောင်ပါ နေ့စားအလုပ်သမား (၂)ဦး တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၇/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Sakura Garment Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်တင်မိုးခိုင် ပါ အလုပ်သမား (၃၁၆) ဦးကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၆/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Seduno Myanmar Fashion Co.,Ltd နှင့် အလုပ်သမား(၁၁၇) တို့၏ ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆန်းမင်းအောင် ပါ (၂) ဦး တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၅/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Yangon Airport Group Co.,Ltd နှင့် ဦးအောင်ကျော်ရှင်း (Operator II) တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၄/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MILA GARDEN COMPANY LIMITED နှင့် ဦးသော်ဇင်လင်း တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ East Growth Garment Co.,Ltd နှင့် မငြိမ်းငြိမ်းအေး(ခ)မသဇင်မြင့် တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ် ချက် (၆၂/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ NEXSTAR GARMENT Manufacturing Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်စိုးမိုးအေး ပါ အလုပ်သမား (၂) ဦး တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Veneer & Plywood Co.,Ltd ၊ သစ်အချောထည်စက်ရုံ နှင့် မောင်ကျော်ဆန်းလင်း ပါ အလုပ်သမား (၂) ဦးကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၀/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ NORTH SHORE GROUP COMPANY LIMITED နှင့် အလုပ်သမား ဦးထွန်းမင်းလတ် ပါ (၂) ဦးတို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၉/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Polar North Garment Co.,Ltd နှင့် ဒေါ်ချိုမာလွင်ပါ (၁၅) ဦး တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၈/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ New KMC Apparel အထည်ချုပ် စက်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ခင်မေသန်း တို့ကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၇/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ PMG အရက်ချက်စက်ရုံနှင့် ဦးထွန်းဝေပါ အလုပ်သမား (၂၁) ဦးကြားဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၆/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Asia Guiding Star Services ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးမင်းနိုင် (အထွေထွေမန်နေဂျာ)နှင့် ဦးရှိုင်းနင်းမွန်း ပါ (၆၄)ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၅/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Asahi Loi Hein Co..,Ltd Blue Mountain စက်ရုံအငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၄/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ UMW Engineering Service Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၄/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Tet Lann Concrete Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Circle Tech Industrial Enterprise Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၂/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ SKYLARK IT Solution & Managed Services အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ပေပေါက်အောက်ရှင်း မြန်မာကြေးနီသတ္တုတူးဖော်ရေးစီမံကိန်း အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၀/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Seduno Myanmar အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၉/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ စိုးမိုးခိုင်သံရည်ကျိုစက်ရုံ ၊ အမှတ် (၆၁/၆၂/၆၃) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၇/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Winner Plastic စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၆/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MDM Industry Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၅/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ MDM Industry Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၄/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Zhenjie အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ OK မုန့်လုပ်ငန်း အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ လန်းပြီပင်လယ်ရေကြောင်းကုမ္ပဏီ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၂/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ World Value Manufacturing Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၀/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ကံကောင်းခြင်းရတနာ သစ်အချောထည်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၉/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၈/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Family Treasure Inn အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၇/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Popular International Garment အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၆/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Belmond Governor’s Residence အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၅/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရာရှင်းသံမဏိစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၄/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြန်မာဟေမာန်ကုမ္ပဏီ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ SMK အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၂/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Rich Life Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ ၏ မြန်မာမေဆမ်းကုမ္ပဏီ (Good Morning ပေါင်မုန့်) အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၀/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၀/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Handsome Garment Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၉/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ တာမိုးညဲချမ်းသာ သစ်အချော ထည် စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၆/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ SOGO FITTING INDUSTRY အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၅/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြန်မာရှေ့ဆောင်ဘဏ် (မြိတ်ဘဏ်ခွဲ) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၄/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Hi Star ဖော့ဘူးစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Young Investment Group Industry အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၂/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Blue Mountain အချိုရည်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ စိန်ကမ္ဘာချည်မျှင်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရာရှင်းသံရည်ကျိုစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Hanjen Manufacturing Co..,Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ North Shore အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ World Jin အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ထိပ်တန်းမြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ AYS MFG Co..,Ltd ပဲသန့်စင်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ပန်ဒါချည်မျှင်အထည်နှင့် အချောကိုင်စက်ရုံ(ပလိပ်) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၆)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ပေါ်ပြူလာ အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၅/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar C & N Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၄/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Bravo အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၂/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှေစကားအထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၁/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ GIYAN Fashion Co..,Ltd ဇာပန်းထိုးစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၇၀/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mingtex Myanamar Industrial Company အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၉/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ World Jin အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၈/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Hill Lodges Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၆/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar CNMC NICKEL Co..,ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၂/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ထိပ်တန်းမြန်မာအထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၆၀/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Silver Lion Industrial Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၈/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ PTTEP International Limited အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၇/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Mani Yangon Co., Ltd စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၆/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ၆၆၆ သံရည်ကျိုစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၅/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Yimei Footwear Product Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၃/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Hanjen Manufacturing Co.,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၂/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Yangon Crown ၀ါယာကြိုးစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၁/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဘိုစန်းပိုက်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅၀/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ P.E.S MYANMAR Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၉/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ PAN KO Myanmar Co.,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၈/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ North Shore အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၇/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ E Land Myanmar Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၆/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဂျိုကာသောက်ရေသန့်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၅/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ E Land Myanmar Co..,Ltd အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၄/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန် ရှိ Myanmar Hao Yang အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၃/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်ရှိ ပန်ဒါချည်မျှင်အထည် နှင့် အချောကိုင်စက်ရုံ (ပလိပ်) အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၂/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရာရှင်းသံရည်ကျိုစက်ရုံ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၉/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Hi Star ဖော့ဘူးစက်ရုံ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၈/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Thai Pot Head Office ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၇/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Thai Pot Head Office/Kross Aisa Co.,Ltd ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၇/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Myanmar Bean and Trading Co.,Ltd ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၆/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Gallant Ocean အအေးခန်းစက်ရုံ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၂/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Midas အထည်ချုပ်စက်ရုံ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၀/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Costec အထည်ချုပ်စက်ရုံ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၉/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဝမင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံ ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၈/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Sage Myanmar Co.,Ltd ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၇/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ကျော်ထက်ထက်ကုမ္ပဏီ ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၆/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ KMA Hotel Group၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၅/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ နယူးဝေးဖိနပ်စက်ရုံ ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၄/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Bogart Lingerie(Yangon)Ltd အထည်ချုပ်စက်ရုံ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၃/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Midas အထည်ချုပ်စက်ရုံ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၂/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ စံကောင်းပီနံအိတ်စက်ရုံ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၁/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြန်မာသစ်ပါးလွှာနှင့်အထပ်သားစက်ရုံ( Myanmar Veneer & Plywood Co., Ltd) ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြန်မာသစ်ပါးလွှာနှင့်အထပ်သားစက်ရုံ( Myanmar Veneer & Plywood Co., Ltd) ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၉/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှင်ချမ်းလုံကုမ္ပဏီ၏ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈/၂၀၁၅)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ACELEDA MFI Co., Ltd. အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၁/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Holly Myanmar Co., Ltd. အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၄၀/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ General Enterprise အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၉/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အမှတ်(၂)အထည်အလိပ်စက်ရုံ(ပလိပ်) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၈/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ ၏ ဂေါ်ဇီလာဆပ်ပြာစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၉/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Golden Min 999 Co., Ltd. အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၈/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ပတ္တမြားပဲဆီစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၇/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Adaman Club Hotel အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၆/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အောင်ဖိုင်ဘာဂလပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၅/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရွှေလရောင်သံရည်ကျုိူစက်ရုံ အမှတ်(၂) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၄/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ သံတော်မြတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ Double Rhinos ဘိလပ်မြေစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၃/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ရှင်ဆောင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၂/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ အာရှအလူမီနီယမ် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၁/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ United Engineering Co., Ltd. အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၀/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ ၏ Gallant Ocean အအေးခန်းစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၉/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ ၏ AAA ဘိလပ်မြေစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၈/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ပြည့်လျှံမိုးအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက် အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၇/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ပြည့်လျှံမိုးအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၇/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Skyward International Trade Limited အဖျော်ယမကာနှင့် ရေသန့်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁၆/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြန်မာတူယူပလိပ်ပြားထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၅/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြန်မာဟေမာန်ကုမ္ပဏီ (ပန်းချီလုပ်ငန်း) အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်(၄/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ Glant ဧရာမသံရည်ကျိုစက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ LEO Group ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၂/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် နှင့် လန်းပြီပင်လယ်ရေကြောင်းကုမ္ပဏီ တို့အငြင်းပွားမှု နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၁/၂၀၁၄)
ခုံသမာဓိကောင်စီ ၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ်(၂၅/၂၀၁၃) ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ အချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်